တဈစကျမှ အသုံးမကပြမေယျ့ မနျယူမှာ ဆိုးလျရှား ဘာကွောငျ့ သကျဆိုးရှညျနလေဲ? – Play Maker Sports Journal
အသကျ၄၈နှဈရှိနျောဝလေူမြိုးနညျးပွဟာ၂၀၁၈ခုနှဈတှငျ ထုတျပယျခွငျးခံခဲ့ရတဲ့ ဟိုဆေးမျောရငျဟိုနရောတှငျအစားထိုးခနျ့အပျခွငျးခံခဲ့ရသူဖွဈပါတယျ။မနျယူဟာ၂၀၁၈-၁၉ရာသီတှငျရလဒျကောငျးရယူလာမှုနဲ့အတူဆိုးလျရှားကိုအမွဲတမျးနညျးပွအဖွဈခနျ့အပျခဲ့ပါတယျ။
မနျယူနောကျခံလူဟောငျးဒါလေးဘလိုငျးရဲ့ဖခငျဘလိုငျးက “ဒီအသငျးရဲ့ကိုယျပိုငျလက်ခဏာကဘာလဲ။သူ့အစီအစဉျကရောဘာလဲ။ဒါတှကေဆိုးလျရှားမှာလုံးဝမရှိတဲ့အရာတှပေါ။သူတို့ကတိုကျစဈကိုအပွညျ့အဝဘယျတော့မှမဆငျဘူး။ကြှနျတျောတို့ဘာမှလညျးမမွငျရပါဘူး။မနျယူအသငျးအခုရှိနတောတှကေကစားသမားတှရေဲ့တဈဦးခငျြး အရညျအသှေးကွောငျ့ပါ။မနျယူဟာကစားသမားတှရေဲ့တဈဦးခငျြးအရညျအသှေးကွောငျ့သာဒီရလဒျရနတောပါ။အသငျးလိုကျကစားမှုကွောငျ့ရလဒျတဈခုရနတောမဟုတျပါဘူး။ပှဲတျောတျောမြားမြားမှာသူတို့ကစားပုံမကောငျးပါဘူး။ပွိုငျဘကျကိုလှမျးမိုးနိုငျဖို့ရုနျးကနျရတယျ။ဒါကအဓိကပွဿနာပါ။အဲဗာတနျနဲ့ပှဲမှာလညျးဦးဆောငျဂိုးရပွီးတော့ပွိုငျဘကျအသငျးတိုကျစဈဆငျခံပွီးတနျပွနျတိုကျစဈဆငျပွီးဂိုးသှငျးဖို့စောငျ့နခေဲ့တယျ။ဒါကမနျခကျြစတာလိုကလပျမြိုးအတှကျလုံလောကျတဲ့ကောငျးမှနျမှုမဟုတျပါဘူး။အဲဗာတနျကခပြေဂိုးသှငျးလိုကျတော့ပှဲကိုအလှညျ့အပွောငျးဖွဈအောငျ လုပျဖို့ခကျခဲနခေဲ့တယျ။အခှငျ့အရေးတှမေဖနျတီးနိုငျဘူး။ယူနိုကျတကျမတိုငျမီတုနျးက ဆိုးလျရှားကိုထိပျတနျးအဆငျ့မှာအကွာကွီးရှိနခေဲ့တဲ့နညျးပွလို့ပွောလို့မရပါဘူး။သူဟာနျောဝမှောခနျြပီယံဖွဈခဲ့တယျ။ဒါပမေယျ့ကှဲပွားတဲ့အဆငျ့တဈခုမှာရှိတဲ့လိဂျမှာပါ။ အခွားနညျးပွတှထေကျမနျယူမှာအခြိနျပိုရနတောကလညျးသူကကလပျရဲ့ကလေးတဈယောကျမို့လို့ပါ။သူဟာ၁၉၉၉မှာဂန်ထဝငျဂိုးသှငျးပွီးခနျြပီယံလိဂျဖလားရအောငျကူညီခဲ့တယျ။ဒါပမေယျ့ဒါတှကေအခုအခြိနျမှာဘာမှအသုံးမဝငျပါဘူး”လို့ပွောကွားသှားပါတယျ။
မနျယူဟာနောကျဆုံးခွောကျပှဲမှာနှဈပှဲတညျးသာနိုငျပှဲရရှိထားပွီးအောကျတိုဘာလ ၁၆ရကျနမှေ့ာ King Power သို့သှားရောကျကာလကျစတာစီးတီးနှငျ့ရငျဆိုငျကစားရပါမယျ။
တစ်စက်မှ အသုံးမကျပေမယ့် မန်ယူမှာ ဆိုးလ်ရှား ဘာကြောင့် သက်ဆိုးရှည်နေလဲ?
အသက်၄၈နှစ်ရှိနော်ဝေလူမျိုးနည်းပြဟာ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုနေရာတွင်အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူဟာ၂၀၁၈-၁၉ရာသီတွင်ရလဒ်ကောင်းရယူလာမှုနဲ့အတူဆိုးလ်ရှားကိုအမြဲတမ်းနည်းပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။
မန်ယူနောက်ခံလူဟောင်းဒါလေးဘလိုင်းရဲ့ဖခင်ဘလိုင်းက “ဒီအသင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကဘာလဲ။သူ့အစီအစဉ်ကရောဘာလဲ။ဒါတွေကဆိုးလ်ရှားမှာလုံးဝမရှိတဲ့အရာတွေပါ။သူတို့ကတိုက်စစ်ကိုအပြည့်အဝဘယ်တော့မှမဆင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းမမြင်ရပါဘူး။မန်ယူအသင်းအခုရှိနေတာတွေကကစားသမားတွေရဲ့တစ်ဦးချင်း အရည်အသွေးကြောင့်ပါ။မန်ယူဟာကစားသမားတွေရဲ့တစ်ဦးချင်းအရည်အသွေးကြောင့်သာဒီရလဒ်ရနေတာပါ။အသင်းလိုက်ကစားမှုကြောင့်ရလဒ်တစ်ခုရနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ပွဲတော်တော်များများမှာသူတို့ကစားပုံမကောင်းပါဘူး။ပြိုင်ဘက်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ရုန်းကန်ရတယ်။ဒါကအဓိကပြဿနာပါ။အဲဗာတန်နဲ့ပွဲမှာလည်းဦးဆောင်ဂိုးရပြီးတော့ပြိုင်ဘက်အသင်းတိုက်စစ်ဆင်ခံပြီးတန်ပြန်တိုက်စစ်ဆင်ပြီးဂိုးသွင်းဖို့စောင့်နေခဲ့တယ်။ဒါကမန်ချက်စတာလိုကလပ်မျိုးအတွက်လုံလောက်တဲ့ကောင်းမွန်မှုမဟုတ်ပါဘူး။အဲဗာတန်ကချေပဂိုးသွင်းလိုက်တော့ပွဲကိုအလှည့်အပြောင်းဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ခက်ခဲနေခဲ့တယ်။အခွင့်အရေးတွေမဖန်တီးနိုင်ဘူး။ယူနိုက်တက်မတိုင်မီတုန်းက ဆိုးလ်ရှားကိုထိပ်တန်းအဆင့်မှာအကြာကြီးရှိနေခဲ့တဲ့နည်းပြလို့ပြောလို့မရပါဘူး။သူဟာနော်ဝေမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမယ့်ကွဲပြားတဲ့အဆင့်တစ်ခုမှာရှိတဲ့လိဂ်မှာပါ။ အခြားနည်းပြတွေထက်မန်ယူမှာအချိန်ပိုရနေတာကလည်းသူကကလပ်ရဲ့ကလေးတစ်ယောက်မို့လို့ပါ။သူဟာ၁၉၉၉မှာဂန္ထဝင်ဂိုးသွင်းပြီးချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရအောင်ကူညီခဲ့တယ်။ဒါပေမယ့်ဒါတွေကအခုအချိန်မှာဘာမှအသုံးမဝင်ပါဘူး”လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။
မန်ယူဟာနောက်ဆုံးခြောက်ပွဲမှာနှစ်ပွဲတည်းသာနိုင်ပွဲရရှိထားပြီးအောက်တိုဘာလ ၁၆ရက်နေ့မှာ King Power သို့သွားရောက်ကာလက်စတာစီးတီးနှင့်ရင်ဆိုင်ကစားရပါမယ်။
ယခုအပတျတှငျ စတိဗျဘရုဈကို နဈနာကွေး ပေါငျ ၈ သနျးပေးကာ ထုတျပယျသှားမယျ့ နယူးကာဆယျ